ကြောက်ဖျား ဖျားနေပါပြီ မကြီးရေ..လို့ ပြောတာလည်း မရ . မအားလို့ ပါဆိုတော့လည်း အေးဆေးပေါ့ဆိုတော့ အောင်မယ်လေး ဒီပို့ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ရှောင်လို့ မရတော့ပါလားဆိုပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ( အနော်က အရမ်း ရှက်တတ်တာ ) ရေးလိုက်ရတယ်။ ဒီက ရည်းစားမရှိ လူပျိုအဖြစ် လုပ်စားမလို့ကို မကြီး လုပ်တာနဲ့ လုပ်စားလို့ မရတော့ဘူး။ ဟီးဟီး။ ကဲ…လက်ရှောင် ပေါက်ကောင်ဖော်မယ်။ အသည်းငယ်သူများ မဖတ်ရ။
ကျွန်တော့် ဂျီတော့ထဲမှာ ဘယ်သူအပ်ထားမှန်း မသိတဲ့ နစ်လေးတစ်ခုက လက်ခံပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာလေး တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိပေမဲ့ လက်ခံခဲ့တယ် ( ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ) ။
“ယူက ဘယ်သူလဲမသိဘူး……ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျွန်တော့် အကောင့်ကို ရသွားတာလဲ”
“ဟင် … ဒီလိုပါပဲ”
သူပြောပြဖို့ အခက်တွေ့နေတယ်ဆိုတာ နားလည်လိုက်ပါတယ်။ သူများမပြောချင်တာကို အတင်းမေးတဲ့ အလိုက်မသိတတ်တဲ့လူက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဆုံးပဲလေ။ ကျွန်တော်မမေးတော့ပါဘူး။ သူ့ဘာသာ ဘယ်ကရရ .. အကြောင်းရှိလို့ အပ်ထားတာပဲနေမှာပေါ့ ဆိုပြီး သူဘယ်ကလဲ ၊ ဘာလုပ်တာလဲ ၊ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲစတဲ့ အွန်လိုင်းလောကရဲ့ မေးရိုးမေးစဉ် မေးခွန်းတွေမေးခဲ့ပေမဲ့ သူမကတော့“ဒီလိုပါပဲ” ဆိုပြီး စကားလမ်းကြောင်းလွှဲလွှဲသွားတတ်တယ်။ မထူးပါဘူး..ကျွန်တော်မေးတာ သူ မဖြေတော့လည်း သူမေးတာ ကျွန်တော်ဖြေရတော့မှာပေါ့။
တစ်ကယ်ကို အဲလောက်ယာဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စွာပြောလာမယ်လို့ ထင်မထားခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် ဘာပြောရမယ် မသိဖြစ်သွားတယ်။ သူမနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ အချိန်တွေအားလုံး သူမက လူကြီးဆန်ဆန် နဲ့ နူးညံ့စွာပဲ ပြောခဲ့တာ သတိထားမိတယ်။
အဲလိုနဲ သူမနဲ့ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းမှာ နေ့တိုင်းတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း ပိုပြီး နားလည်လာကြသလို အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ သူမ မှာ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိလာရင်၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေ ရှိလာရင် ကျွန်တော်က သူမအတွက် နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့၊ ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးတတ်ပြီး ကျွန်တော် စိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိလာရင် သူမက အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီး နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်။
“သူငယ်ချင်းဘဝဆိုတာ အဖြူရောင်ချယ်ထားတဲ့ အိပ်မက်လေးပါ”
သူငယ်ချင်းဘဝမှာ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ သူမနဲ့ တွေ့ဖြစ်နေကျ ညတွေတိုင်းကို အမြန်ဆုံး ရောက်ချင်နေခဲ့တယ်။ ညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ နစ်လေးဖွင့်ပြီး သူမကို စောင့်နေမိတယ်။ သူမလည်း ကျွန်တော်လိုပဲနေမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ သူမ မအားရင် မလာဖြစ်တဲ့အကြောင်း မေလ်းလေးတော့ ချန်ထားမြဲပါပဲ။ အဲလို သူမ မလာဖြစ်တဲ့ နေ့ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာလုပ်လို့ ၊ ဘာကိုင်ရမယ် မသိတော့ဘူး။ စာပဲ ကျက်ရမလို၊ ထပဲ အော်ပြစ်ရမလိုလို၊ အိပ်ပဲ အိပ်လိုက်ရမလိုလိုနဲ့ ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီးနဲ့ တစ်ခုခု လိုနေ သလိုကြီးခံစားလာရတယ်။
ကျွန်တော် ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ သူမကို အရမ်းခင်လို့ အခုလောက်ထိ သံယောဇဉ်တွယ်နေတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် သူမကို ချစ်နေမိတာလား။
အချစ်ဆိုတာ ရင်းနှီးမှုကနေ စလာတာ လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ကျွန်တော် သူမကို ချစ်နေမိပြီလား။ မချစ်သေးဘူးလားဆိုတာ သေချာ စဉ်းစားမရခဲ့ဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ သူမ မရှိရင် မနေတတ်ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။
“ကောင်မလေးရေ..ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေပါကွာ။ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာအောင် မကစားပါနဲ့”
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပြီး ၆လ အကြာ ( ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ၊ ချစ်သူများနေ့ ) မှာ သူမနဲ့ကျွန်တော် အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲနေ့မှာ အမှတ်တရလေး ဖြစ်သွားအောင် ဆိုပြီး ကျွန်တော် သူမကို Propose လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကယ်တမ်း သူမနဲ့ တွေ့ဖြစ်တော့ ဘယ်လို မှ ပြောမထွက်ဘူး။ ရင်တွေ အရမ်းခုန်လာသလို၊ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေလည်း အေးလာတယ်။ ကိုယ်က မဟုတ်တာ လုပ်တော့မှာကိုး။။။ အဖြူရောင်သူငယ်ချင်းဘဝကနေ ချစ်သူဘဝကို ကူးပြောင်းပေးဖို့ ဘယ်လို အင်အားနဲ့ ပြောရမှာလဲ။ သူမကရော ဘယ်လို ထင်မလဲ။ စိတ်ဆိုးသွားရင် အရမ်းခင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းလေး ဘဝတောင် မရတော့မှာ အရမ်းစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်။
“မင်းကို ကိုယ်အရမ်းချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စာလေးက အဆင်သင့် ရိုက်ပြီးသား Enter လေး နှိပ်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒီ အချိန်လေးက ကျွန်တော့် ဘဝမှာ ရင်အခုန်ဆုံးပါလို့ ပြောရင် မမှားဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သူမ ဘာတွေ ပြောနေတယ် ဆိုတာလည်း မသိတော့ဘူး။ ကိုယ့် အတွေးနဲ့ ကိုယ်ကိုပဲ တစ်ယောက်တည်း ရူးနေတာ။ Enter လေး နှိပ်မယ်လုပ်ပြီး မှ ရိုက်ထားတာလေးကို ဖျက်ပြစ်လိုက်၊ ပြန်ရေးလိုက်တဲ့ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်တော့ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး တာနဲ့ ကျွန်တော် သူမကို ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စာလေး ပြန်ရေး.. ဘာမှ စဉ်းစားမနေတော့ပဲ Enter ကို မျက်လုံး မှိတ်ပြီး ရိုက်ချလိုက်တယ် ။ ( အဲလို သတ္တိကောင်းတာ )
“ကောင်မလေး … နင် ငါ့ကို စိတ်ဆိုးသွားပြီလား”
မနေ့ညက သူမကို ချစ်တယ်ပြောပြီး နောက်နေ့မနက် သူမဆီ ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။
“ဟာ .. ဒါဆို စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့ ဟုတ်လား” ကျွန်တော်ကလည်း သိတယ် မလား လူလည် ချက်ဖောင်းပဲလေ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အမိအရ ယူတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့…မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် လွဲခဲ့တယ်လေ။
“မဟုတ်ပါဘူး … ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဆိုးနေတာပါ”
“အော် … အဲလို ပြောဖြစ်အောင် ကိုယ်ကပဲ အနေအထိုင်မတတ်ခဲ့လို့လားလို့ပါ”
“ယူ့မှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူး … ရည်းစားစကားအပြောခံရအောင် အနေအထိုင်မတတ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အပြစ်တင်မိပါတယ်”
ကျွန်တော် မနည်းရှင်းပြလိုက်ရတယ်။ ရည်းစား စကားပြောခံရတာ အဲလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်ရမယ့် အရာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း၊ ကိုယ် ဘယ်လိုပဲ နေနေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူကတော့ ပြောလာမှာပဲလေဆိုပြီး တွေ့ကရာလျှောက်ပြောပြီး ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။ (ကိုယ်က Propose လုပ်ထားတဲ့ သူကိုးးးးးးးးးးးးး။ )
နောက်ဆုံး သူမဆီက စဉ်းစားပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့ လက်သုံးစကားနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်။ ဘယ်တော့ ပေးမှာလဲ လို့ မေးကြည့်တော့ ပြန်လာရင်ပေးပါ့မယ်တဲ့ ။ သေစမ်းဟဲ့ ... နန္ဒိယ ကျွန်တော် မြန်မာကို ပြန်ဖို့က ၂ နှစ် ခွဲတောင် ကျန်သေးတယ်။ အဲလောက်ကြီးတော့ မလုပ်နဲ့လေဆိုပြီး သူမနဲ့ တွေ့တိုင်း ဈေးဆစ်တယ်။ သူမကလည်း ခေါင်းမာတယ်။ တစ်ပြာသားမှ မလျှော့ဘူး။ ဈေးဝယ်သလို မလျှော့ပေးရင် မယူတော့ဘူး ဆိုပြီး လှည့်ပြန်သွားလို့ကလည်း မရနဲ့ (အညာစကားနဲ့ ပြောရရင်) တော်တော် ဂွကျနေပြီ။
နောက်ဆုံး ဇနကထုံး နှလုံးမူပြီး မလျှော့သောဇွဲနဲ့ ဈေးဆစ်တာကြောင့် နောက် ၆လ အကြာမှာပဲ သူမဆီက အဖြေကို ရခဲ့တယ်။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလည်း တစ်နှစ်ပြည်ပြီး သွားပါပြီ။ ချစ်သူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေ ရှိသလို၊ ပြသာနာဖြစ်တဲ့ နေ့တွေလည်း ရှိခဲ့တာပါပဲ။ သံယောဇဉ် အရမ်းကြီးပြီး အလေးအနက်ထားတတ် တဲ့ သူမ၊ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားပြီး မာနမရှိတဲ့ ကျွန်တော်၊ အရာရာက လွဲမှားစွာ ရှိနေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြီး နားလည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
“ချစ်သူဘဝဆိုတာ တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာစွာ နေနိုင်ဖို့ အတွက် ချစ်သူနှစ်ယောက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် လေ့ကျင့်နေတဲ့ ကာလပါပဲ”
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရင်ကထက် ပိုပြီး နားလည်ပေးခဲ့တယ်။ ပြသာနာ တစ်ခု ဖြစ်လာရင် နှစ်ယောက်တူတူ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်။ ကျွန်တော့် အပေါ်မှာ သူမ အရမ်း နားလည်ပေးတယ်။ ကျွန်တော် ဘာပဲ လုပ်လုပ် ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တဲ့ သူမရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့
အတွက် ကျွန်တော် ကျေနပ်သလို၊ သူမ အပေါ်မှာ ထားတဲ့ ကျွန်တော့် အချစ်အတွက်လည်း သူမ ကျေနပ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် သူမကို ချစ်တယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း ပြောင်းလဲ သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်ကြောင့် မင်း နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ မင်းကို နာကျင်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ကိုယ့့််မှာ တစ်စိုးတစ်စိ မှ မရှိပါဘူး။
ကိုယ်ကတော့ မင်းဆီက ရခဲ့တဲ့ အရာ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကား အပါအဝင် မင်းပေးခဲ့တဲ့ အရာ အားလုံးဟာ ကိုယ့်အတွက် လက်ဆောင်တွေပါပဲ။ ထာဝရ အတွက်ပါ။ ကိုယ့်ဘဝမှာ ဘယ်တုန်းကမှလည်း မင်းအပေါ်ကို အပြစ်မမြင်ရက်ခဲ့ပါဘူး။ (သူက ဘာအပြစ်မှ မှ မလုပ်တာ။ လုပ်တာက ကျွန်တော် :P )
“ကောင်မလေးရေ … မင်းကိုပေးဖို့
ငါ့မှာ ရင်ခွင်တစ်စုံပဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ ရင်ခွင်မှာ နားခိုပါ။
အဲဒီ ရင်ခွင်ထဲမှာ ငိုကြွေးပြစ်လိုက်ပါ။
မင်းအတွက် အင်အားတွေ မွေးထုတ်ပေးမယ့် နေရာတစ်ခု
မင်းအတွက် အသက်ရှင်နေတဲ့ ရင်ခွင်တစ်စုံပါ
မင်းကို ချစ်တဲ့ အချစ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။”
ကျွန်တော် နဲ့ သူမ အပြင်မှာ ဆုံတွေ့ခွင့် ရမယ့်နေ့လေးမှာတော့ …ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ကျေးငှက်လေးတွေရဲ့ သံပြိုင်ဆုတောင်းလေးတွေ နဲ့ သာယာလှပနေပါလိမ့်မယ်။
“ယနေ့မှ စ၍ ကြင်သူနှစ်ဦးအပေါ်တွင် ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ”
မှတ်ချက်။ ။ သူမ ကျွန်တော့်ကို ဂျီတော့ အပ်ရခြင်းမှာ သူမ ညီမက ကျွန်တော့် အကောင့်ထဲမှာ ရှိနေလို့ ဘယ်လို သူလဲ ဆိုတာ Checking လိုက်ဖို့အတွက်ပါတဲ့။ (တော်တော်လေးကြာမှ သိခဲ့ရတာ ) ဇာတ်လမ်းရှည်မှာ ဆိုးလို့ ချစ်သူဘဝ အကြောင်းကို အတိုချုံးရေးလိုက်ပါတယ်။